Mapfupi ari kurova mumazuva ayo ekutanga paApp Store | IPhone nhau
Mapfupi ari kubudirira mumazuva ayo ekutanga, tinokurudzira vamwe
Shortcuts ndeimwe yeanokumbira ayo akwezva runyerekupe rwakawanda mumazuva apfuura, kunyanya sezvo yanga iri nguva yakanaka mubeta. Apple yakazviburitsa senzira yekuita kuti Siri ive nehungwaru, chaizvo nekuti zvinotora zvakanakisa zvekushomeka kweKufamba Kwemabasa uye yakanakisa yaSiri, ichibatanidza zvese zvinoshandiswa uye ichipa zvinoshamisa mhedzisiro.
Wedu watinoshanda naye Nacho Aragonés akagovana Pfupiso iyo yatinogona kutanga yedu Spotify playlist, uyezve isu tine vamwe vanorodha pasi zvakananga kubva kuYouTube. Shortcuts rave kubudirira kusati kwamboitika uye ratopinda mu "top" yeanonyanya kutorwa maapplication emahara paApp Store.
Tinoda kutora mukana wekukurudzira chiteshi che teregiramu mauri iwe kugovana mapfupi ako nevashandisi uye panguva imwechete kuwana dura rayo remakanakisa mapfupi muSpanish, kuwana pa IZVI ZVINONZI. Nenzira imwecheteyo isu tinogovana izvo zviviri zvatakataura nguva yadarika:
Ipfupi kurodha pasi YouTube mavhidhiyo
Ipfupi yekuvhura Spotify zvinyorwa pamwe naSiri
Izvo izvo Mapfupi akazvimisa panguva yekunyora iyi mitsara munzvimbo yegumi neimwe yezvakanyanya kurodha maapplication emahara kubva kuApp Store., Kuwana avhareji mamakisi e4,3 nyeredzi, kunyangwe zvichizofanira kutaurwa mune izvi kuti Apple yabiridzira zvishoma nekuchengetedza mamakisi uye ongororo dzaive nebasa reMabasa panguva iyoyo. Kunyange chiri chokwadi kuti iko kunyorera kuchiri kuzere paKufamba kweBasa uye kungorerutsa mashandisiro ayo uye kwakanyatso kuisanganisa naSiri.
Zviri pachena kuti kana mapfupi akatanga kuenda kuhutachiona uye achigovaniswa, nharaunda ichakura nekugadzira mapfupi anowedzera anobatsira uye nekudaro kubvumira vashandisi kuwana zvakanakisa kubva kune edu ane simba mafoni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Mapfupi ari kubudirira mumazuva ayo ekutanga, tinokurudzira vamwe
Ini handizive nezve vamwe vaverengi, asi ini handikwanise kuvhura teregiramu chiteshi. Kubva kuPadad, iyo Teregiramu yakavhurwa kuburikidza nesafari uye haina kuvhura chero chiteshi
Yakagadzirisa iyi link
Iyo yekudimbudzira chinongedzo chekutora mavhidhiyo eYouTube yakaipa.
Zvirinani ona boka reteregiramu
"Mapfupi akaiswa panguva yekunyora muchinzvimbo chegumi nerimwe"
Ngatione kana mushure menguva yekunyora iyo mitsara mumwe munhu anoiongorora
regumi nerimwe, anoenda
1. chirevo. Yakati yechimwe chikamu: Icho chimwe chezvikamu gumi nerimwe zvakaenzana umo chakazara chakakamurwa.
Ndatenda nekutora nguva kugoogle uye kuteedzera pano. Yakagadziriswa.
Ndokumbirawo mugadzirise chinongedzo kuTeregiramu chiteshi
Pindura kuna Alber
Kumbira nhamba yefoni kuti inyure mune spam.
Ndati, zvinongedzo hazvishande
Ndokumbirawo mugadzire chinoshaikwa chinongedzo uye ndingafarire kukwanisa kujoina